Fa maninona no tsy mety miravona amin’ny raharaham-pihavanana ity crise eto Mada ity ? Ny crise politique aloha dia nisy tokoa , eo amin’ny mpitondra fanjakana sy mpanohitra , tsy lavina izany . Kanefa ,matoa tsy miravona amin’ny fifampiraharahana izy io tao anatin'ny 3 volanadia misy zavatra hafa izay efa fahita ao Afrika izy io .
Ny fomba fihetsiky ny andaniny izay milaza fa DEMOCRATE dia : herisetra , eny fa na ankizy any any amin’ny maternelle aza dia poirina hivoaka ; ny mpianatra mianatra , tapa-biriky no amoahana azy , ny horohoro @ fiaraha monina fatratra , halatra , dorotrano , tena dahalo e ! ny mpiasa fonctionera misy andiany 20 na 30 izy mamoaka azy ao . Tena sahy ry zareo , porofo zany fa misy mpanohana matanjaka ao an-damosina ao . Iza ary no sponsor ?
Ny international efa mampitandrina fa NY BAILLEURS DE FONDS ange ka tsy hisy ho tafajanona eto amin’izao insécurité zao e ? Tsy raharahin-dry zareo izany ,satria ny bailleurs-ny amin’izao fotoana izao dia tena matanjaka tokoa : ireo grandes compagnies pétrolières sy ny firenena tompony , sy ireo bailleurs mpanao politika azo lazaina fa madinika any ampita any sy ireo matahotra ho voaroba eto an-toerana etc...Ary rehefa hahazo fitondrana izy , ataony inona intsony ny bailleurs fa efa azy ny pétrole dia ny gasy kely mahantra fadiranovana eo .
Ny fitrandrahana io pétrole eto amintsika io mantsy dia toa homena ny Norvéziana satria io no firenena mpitrandraka pétrole zay mba manome ristourne be indrindra ho an'ny tompon-tany 50/50 ; fa ireo grandes compagnies européennes ireo dia manao superbénéfices , ka ny vahoaka tompony ndray no fadiranovana , jereo ange ny zava_miseho any Afrika e ! amin’izay misy pétrole e ?
Ambonin'izay fomban-dry zareo Cie européennes sy ny fireneny mi provoquer coup d'état militaire foana ,dia misy guerre civile eo amin’ilay firenena .
Isika Malagasy ve dia hanaiky an'izany ? Ireo Tgviste reo ange dia pantins fotsiny ,sady mampalahelo e, Ka aoka isika hivavaka mafy satria ao ambadik'izao zavatra izao dia ao koa ny Loges rehetra te hitantana izao tontolo izao sy ny hareny ,syny tafika ,ny justice etc....
Isika dia samy malagasy iray rà ,ary manana an' Andriamanitra ,ka aoka re zay e ! Aoka tsy hifampitsara fa hifampivavaka sy hifamela heloka ary handinika ny zavatra maizina mibaiko zao eto Mada izao . DIa Masina ny tanindrazana ka tsy azo atao vazivazy ny fitantanana azy sy ny olona ao . Mahereza daholo ry GASY TSY VERY ary mivavaha ho an'ny tanindrazantsika .
Renim-pianakaviana feno fanantenana